Items 1 to 16 of 1145 total
Control system with Chinese，English display screen，stainless steel body，after the parameters (filling amount and length of bag) are set at the display setting unit，the control system will automatically optimize and match the actions．thus achieving best packing speed，Reliable and stable duaI light source photoelectric check detective system，assuring complete logoof the packing bags．Controlled by intelligent temperature controller，automatic measuring，bag making，filling，Sealing，marking，cutting and counting．
Sandwich များ ပြုလုပ်ဖို. Sandwich maker လေးကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။ Sandwich များသာမက ပေါင်မုန်.ကြက်ဥ အကင် (French Toast) ကိုလည်း Video အတိုင်း လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူချင်ရင် ဖုန်းလေးသာ ဆက်ပေးပါ။ ဈေးနှုန်း ၂၅၀၀၀ ကျပ် Delivery free in Yangon မြန်မာနိုင်ငံ မြို.ကြီးများ အားလုံးကို အိမ်အရောက်ပို.ခ ၃ထောင်ကျပ်ပါ။ တခြားမြို.များကိုတော့ ကားဂိတ်အထိသာ ပို.ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ 09264686461 (Male) also viber 09784419691 (Female) also viber 09961127000 (Office) ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းမဆက်လိုသူများအတွက် Order form https://order.moby.asia/Order?sId=eaftak9Y83U7mNyPYdzrdA%3D%3D Message ပို.ပြီးလည်း မှာယူနိုင်ပါတယ်။ http://m.me/rocketonlineshopping ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...
1900000 ~ 3800000 Kyats
High (Normal) Inlet Temperature Air-cooling Refrigerated Air Dryer ● Inlet temperature：≤ 80℃ (45℃ ) ● Cooling method：Air-cooling ● Inlet pressure：0.4-1.3Mpa ● Pressure drop：≤0.03Mpa ● Dew point：2～10℃ ● Refrigerant：R22 ဂျာမဏီနိုင်ငံထုတ် Air dryer အမျိုးအစားဖြစ်ပြီ စံချိန်စံညွှန်းမီပြည့်မှီစွာ ထုတ်လုပ်ထားသည့် အတွက် သုံးစွဲသူတိုင်း စိတ်ချမ်းသာစေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ DENAIR Brand ကိုဝယ်ယူအားပေး လိုပါက ကျွန်တော်တို KGS Myanmar ကို ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
Rotating band saw machine is one of the most advanced band saw machine in domestic market, except the vertical cutting function the saw log can rotating0till 45degree by manual, Implementation of oblique, this band saw machine apply to the channel steel, H steel, and other special-shaped steel, blank pipe, please metal and other metal materials, compact and rational layout, easy to operate, and convenient to maintenance.
Toshiba e-STUDIO Multifunction Printers မိတ္တူစက် သည် လုပ်ငန်းသုံး ၊ ကျောင်းသုံး ၊ Computer သုံးသူများအတွက် ဖြစ်မဖြစ်ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ Toshiba Brand အမျိုးအစား မိတ္တူစက်သည် ဇကာ ၄ခုပါသောကြောင့် မိမိကြိုက်သော A4 ,A3 size စုံအသုံးပြုနိုင်သည်။ အရေးအသွေးကောင်းမွန်သော products များကိုသာ တင်သွင်းဖြန်ဖြူးလျက်ရှိသည်။ LUCKY BIRD Group of Companies Co.,Ltd သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် 1999 ခုနှစ်မှ ယနေ့တိုင်အောင်မြင်နေသော Company တစ်ခုဖြစ်သည်။
LEO Pump Apm60
1. clean water 2. Applied for small living water supply,automatic water sprinkler system3.small air conditioner system, supporting equipment .
The wet grinding feature assures extremely fine finish on teeth surfaces and greatly extends cutting period of saw blade. Grinding amount adjustment is accurately indicated by dial gauges. Variable grinding speed is controlled by frequency inverter. The micro-computer control provides automatic and humanized operation. Electronic parts and circuit design meet CE standards. Electronic parts feature multiple interference resistances and protections.
Top and Bottom drive belts(FXJ6050) ◆ Side drive belts(FXJ5050) ◆ Inter changeable top bottom tape cartridge ◆ 2&quot; Top and Bottom Tape Head ◆ Tape Overlap length can be adjusted from 55~65mm to 75mm ◆ Roller working table ◆ Manual Top Squeezers ◆ Blade guards ◆ Crank Handle adjustments ◆ Leg height adjustment 240mm ◆ Infeed/Outfeed Tables and 3&quot; Tape Head are optional ◆ Optional casters locking/swivel ◆3inch side sealing are optional
SOGO အမှတ်တံဆိပ်ရေတိုင်ကီသည် သပ်ရပ်လှပပြီး ကြာရှည်ခံပါသည်။ 300L, 500L, 1000L, 1500L, 2000L, 3000L, 4000L နှင့် 5000L အထိရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆောက်အအုံသုံး၊ စက်ရုံသုံး၊ အိမ်သုံး ရေတိုင်ကီအဖြစ် အသုံးပြုကြပါသည်။ အလျားလိုက် (Horizontal)၊ ဒေါင်လိုက် (Vertical) နှင့် စတုရန်းပုံ (Square) ပုံစံအမျိုးအစားများ မှာယူနိုင်ပါသည်။ အရောင်းဆိုင်ကို စော်ဘွားကြီးကုန်း အင်းစိန်တွင် တည်ရှိပါသည်။
Hong Ky professional pillar drill KH800 of drilling machine
ll the machine parts are processed under fully automatic technology (CNC) of Japan The accuracy between splines (grooves) is 0.05 mm (5/100 All the machine parts are precisely grinded 0.005 mm (5/1000) The set of axis is made of S45C steel that helps to increase the longevity. Cone drill (HK-KCP12; HK-KCP15) use cutting hand to hook the groove, running lavet (compound table Option: Can choose Motor3phase